Vaovao - Ampidiro ny asidra amino
Inona ny asidra amine?
Ny asidra amino dia singa fototra izay mandrafitra ny proteinina, ary fitambarana voajanahary izay atômônôma ao amin'ny ataona karbônika amin'ny asidra karboksilika dia soloin'ny vondrona amino. Ny asidra amino dia afaka mamolavola proteinina ao anaty sela, ary koa akora misy amina toy ny hormonina, antibody ary creatine. Ho fanampin'izany, ny asidra amine dia azo ovaina ho gliosida sy tavy koa, na ampidirina oksizenina mivantana ho lasa gazy karbonika sy rano, ary ny urea dia afaka mamokatra angovo. Raha tsy misakafo tsara mandritra ny fotoana maharitra ianao, dia iharan'ny tsy fanjarian-tsakafo sy tsy hiasa hery malemy. Na malemy loatra ny vatana aorian'ny fandidiana. Amin'ity tranga ity, misy asidra amine sasany azo tsindrona mba hampiroborobo ny fahasitranan'ny vatana.
Asidra amine roapolo no manondro ny glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine (methionine), proline, tryptophan, serine, tyrosine, cysteine ​​Acid, phenylalanine, asparagine, glutamine, threonine, aspartic acid, glutamic acid, lysidine, arginine dia ny proteinina mandrafitra ny singa velona.
Ahoana no hamenoana asidra amine manan-danja?
Voalohany, tazomy hatrany ny sakafo. Izany hoe ny fampifangaroana sy fihinanana proteinina sakafo isan-karazany hahatratrarana ny vokatra mifameno amin'ny tsy fahampian'ny asidra amine amin'ny sakafo isan-karazany, mba hitazomana ny sakafo mahavelona proteinina asidra ampy sy voalanjalanja.
Faharoa, fadio ny fihinanana matavy be loatra. Sakafo be tavy ny proteinina avo matetika. Satria ny olona maoderina dia mihinana proteinina biby betsaka kokoa ary tsy dia manao fanatanjahan-tena firy amin'ny fotoana iray, ny sakafo matavy be dia mety hiteraka vokadratsin'ny fahasalamana. Noho izany, rehefa misafidy sakafo proteinina ianao dia safidio ny sokajy misy atiny ambany tavy ary mora entina amin'ny vatan'olombelona, ​​ary ialao ny fihinanana matavy be loatra. Ny mpahay sakafo dia mizara ny nofon'ny biby ho hena mena sy hena fotsy. Kisoa, hen'omby ary zanak'ondry dia an'ny hena mena, fa ny akoho amam-borona sy trondro kosa an'ny hena fotsy. Amin'ny ankapobeny, ny sandan'ny sakafo fotsy dia ambony noho ny hena mena.
Fahatelo, misafidy famenon-tsakafo asidra amine avo lenta. Noho ny hafainganam-pandehan'ny fiainana maoderina, ny sakafo isan'andro somary tsotra, ary ny fihenan'ny fandevonan-kanina ny proteinina sy ny fitrohana noho ny fahanterana na aretina mitaiza amin'ny vatan'olombelona, ​​ny famenon-tsakafo mety amin'ny famenon-tsakafo asidra amine misy ny asidra amine ilaina rehetra ho an'ny ny vatan'olombelona dia hanatsara ny fihinan'ny asidra amine sy ny proteinina. Ny haavon'ny fahasalaman'ny olombelona dia misy lanjany lehibe.